वाम गठबन्धनप्रति जनताको चासो
वसन्त घिमिरे संविधानको भावनाअनुसार तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई कार्यान्वयनको दिशामा समेत अगाडि बढिसकेको छ। यसले जनतामा आशा जगाएको छ। विगतको समयमा भए⁄गरेका सत्ता समीकरणका साथै अन्य क्रियाकलापबाट नेपाली जनता
डिल्लीराम मिश्र वि.सं. २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले देशमा मानवीय र भौतिक सम्पदाको अपार क्षति हुन पुग्यो। यस भूकम्पबाट नेपालीको ऐतिहासिक आभूषणको रूपमा रहेका धेरै कला–सम्पदाहरू नष्ट भए। तीमध्येको एउटा जीवन्त
प्रचण्ड एजेन्डामा सधैँ विजयी
कपिल काफ्ले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको अभ्यास चलिरहेको छ। कतिले एकताको सम्भावना देखेका छैनन् भने कति मुलुकका लागि वामपन्थीहरूको एकीकरण आवश्यक भएकोले समयको मागलाई कसैले रोक्न नसक्ने
प्राज्ञिक पत्रकारको संस्थागत संरचनाको खाँचो
महेश श्रेष्ठ सूचना सञ्चारको विकासले आज विश्व हत्केलामा अट्ने भएको छ। निमेषभरमा हामी विश्वका सूचनाबाट सुसूचित पनि भइरहेका छौं। र, सूचनामा पहुँचका आधारमा समृद्धिको मापनसमेत हुन थालेका छन्। हाम्रो सन्दर्भमा
डा. ज्ञान बस्नेत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको समाप्ति भएको केही हप्ता बितिसक्यो तर देशको राजनीति विवाद र शक्तिसंघर्समा नै बितेको छ। कथित नयाँ नेपालको पुराना नेता, नेतृत्व र दलहरुले पुरानै
चिरञ्जीवी मास्के जनताको बहुदलीय जनवाद के हो ? विचार हो कि, कार्यक्रम हो कि, कार्यदिशा हो ? यसको स्पष्टीकरण एमालेका नेताहरूले दिन सक्छन्। किनभने नेकपा एमालेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय
भूकम्प दिवस र सुस्ताएको पुनर्निर्माण
रुपनारायण खतिवडा १९९० साल माघ २ गते गएको महाभूकम्पको स्मृतिमा २०५५ सालदेखि हरेक वर्षको माघ २ गते मनाउने गरिएको भूकम्प सुरक्षा दिवस यस वर्ष पनि मनाइँदै छ। ‘सबल समुदाय र
बद्री तिवारी शशी अर्थात् (त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन पदमा चार वर्षपहिले नियुक्त भएका तर मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्ष रहँदा लाइसेन्स परीक्षामा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारद्वारा अनुसन्धानको दायरामा परी बर्खास्तमा
भ्रष्टाचारको उर्वरतामा दिगो विकासको सपना
डा. माधवप्रसाद कोइराला नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकी राजदूत अलाइना बी. टेपलिट्जले आफ्नो ट्वीटरमार्फत १७ सेप्टेम्बर २०१७ मा अंग्रेजी भाषामा भनेकी छन्, ‘भ्रष्टाचारको प्रतिवेदनमा उल्लिखित अभियुक्तहरूलाई सरकारले आक्रामकरूपमा तहकिकात गरी
वाम गठबन्धन र जन अपेक्षा
खेमराज निरौला मुलुकमा २०७४ सालमा सम्पन्न भएका तीनै तहका निर्वाचनमार्फत नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गरी आगामी ५ वर्षसम्मका लागि स्थिर सरकार निर्माण गरेर देशलाई
तरुण तपसीमा लेखनाथ पौड्याल
केशव अधिकारी नेपाली साहित्यका धेरै उज्याला नक्षत्रहरूमध्ये लेखनाथ पौड्याल पनि एक हुन्। वि.सं. १९४१ मा कास्की जिल्लाको सुन्दर गाउँ अर्घौं अर्चलेमा जन्मेर उनले करिब ९ वर्षकै उमेरमा चण्डीजस्ता संस्कृतका धार्मिक
केशव अधिकारी विगतदेखि नै करिब एउटै सिद्धान्त बोकेका दुई राजनीतिक दल एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच एउटै गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने सहमति बन्यो। दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वले समझदारी बनाएर चुनाव
रमेश भट्टराई “सहृदयी” जुन इतिहासलाई याद नगरी आत्मगौरव नै अपुरो हुन्छ त्यो नामसँग, त्यो इतिहाससँग विवादको रोइलो खन्नुको तुक नरहला। इतिहासका पानामा आजका लागि पनि उत्तिकै कालजयी गुणको शूरताले एकतासँग
कांग्रेसको चुनावी पाटो र अबको बाटो
पबिता मुडभरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैको चुनावी परिणामबाट नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका फेरिएको छ। प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ कुल १ सय ६५ सिटमध्ये कांग्रेसले २३ सिट मात्र जितेको छ। चुनावमा प्रतिस्पर्धी
डा. टीकाराम पोखरेल सकारात्मक अर्थमा बुझ्दा गठबन्धन गर्नु भनेको कुनै लक्ष्य हासिगर्नका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा समूह एक हुने काम हो। यसलाई कुनै उद्देश्यपूर्तिका लागि गरिने मिलोमतो
आनन्द पोखरेल संयुक्त वाम गठबन्धनका सर्जक कमरेड केपी ओली र प्रचण्ड हुनुहुन्छ। यो गठबन्धनले निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदन प्राप्त गरिसकेको छ। संयुक्त वाम गठबन्धनको घोषणापत्रले समेत स्वीकृति पाएको छ। वामपन्थीहरूको साझा उम्मेदवारले
राजनीतिक स्थायित्वः अवसर र चुनौती
डा. डीआर उपाध्याय १ वर्षभित्रै स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। यी निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न हुनुलाई साँच्चै ठूलो राजनीतिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ। नेपालभित्र तथा बाहिरका केही तत्त्वहरूले
लोकसाहित्यका डोट्याली शब्दकोष
वासुदेव भाइसाब मोहन दुवाल स्कृति र लोकसाहित्यमा आफ्नो मूल क्षेत्र बनाएर जीवनका धेरै क्षणहरू साहित्यिक जगत्मा समर्पित तुल्याई सिर्जनामा मन लगाइरहने एकजना स्रष्टा हुन््– वासुदेव भाइसाब। लोकसाहित्य अन्तर्गतका लोकशब्दका खोजीमा
एमाले–माओवादी एकता बाध्यता कि आवश्यकता ?
दीपक खनाल जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने नेकपा (एमाले) र एक्काइसौँ शताबदीको जनवादद्वारा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्दै आएको नेकपा (माओवादी) केन्द्रबीच पार्टी एकता हुने चर्चाले राष्ट्रिय⁄अन्तर्राष्ट्रिय बजार पिटिरहेको छ। कतिपय
पेशल आचार्य प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको चुनावी परिणाम प्राप्त भएको करिब एकसाता हुन लाग्यो। अन्ततः दुवै परिणामको योगफलले एमालेलाई मुलुककै ठूलो जनअनुमोदित राजनीतिक पार्टी साबित गरिदियो। माओवादी केन्द्रसमेतको मत